Black Canyon | Strong Source Holding Co., Ltd
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူငယ်တွေရော လူကြီးတွေကြားပါ ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့ Black Canyon ကို 1993 ခုနှစ်တည်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Coffee House တွေ၊ ထိုင်းရိုးရာစားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို အရည်အသွေးကောင်း၊ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နဲ့ စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရှော့ပင်းစင်တာတွေ၊ ဆေးရုံတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေ၊ ဆီဆိုင်တွေ၊
Convention Center တွေနဲ့ လေဆိပ်တွေလိုမျိုး လူစည်ကားတဲ့နေရာတွေမှာပါ နေရာအနှံ့တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Black Canyon ဆိုင်ခွဲ တွေကိုလည်း မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာ ဆိုင်ခွဲပေါင်း (၄၁၀) ထိ တိုးချဲ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အရသာအရှိဆုံး Thai Foods အမျိုးမျိုးကို ဆိုင်နေရာကောင်းကောင်းမှာ စားဖို့အတွက်ဆိုရင် 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌 𝑪𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏 ကို သတိရလိုက်ပါ။ 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌 𝑪𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏 အနေဖြင့် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဆိုင်ခွဲ (၇) ဆိုင်တိတိ ဖွင့်လှစ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ Outlet တွေတိုင်းမှာဆိုလျှင်လည်း အမျိုးအစားစုံလင်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အစားအသောက် Menu များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားလျှက်ရှိပါတယ်။ Worldwide အားဖြင့် Thai food လောကမှာ နာမည်ကောင်းနဲ့ လူသိများသော 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌 𝑪𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏 ရဲ့ Signature Food Menu များ၊ အရသာသစ်တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြည်းစမ်းနိုင်မယ့် 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌 𝑪𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏 ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ 𝐷𝑟𝑖𝑝 𝐶𝑜𝑓𝑓𝑒𝑒 နဲ့ 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝐶𝑎𝑛𝑦𝑜𝑛 𝑊𝑎𝑓𝑒𝑟(𝐵𝑜𝑥) လေးတွေ အစရှိတဲ့ ထူးခြားချက်လေးတွေကလည်း စိတ်ကျေနပ်စေမယ့်တစ်စုံတစ်ရာအဖြစ် ရှိနေမှာပါ။
Thai Foods အမျိုးမျိုး၊ Drinks အမျိုးမျိုးတို့ကို စုံလင်စွာရရှိနိုင်ပြီး အေးချမ်းတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကို မက်မောတဲ့သူတိုင်းအတွက် 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌 𝑪𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏 ဆိုင်ခွဲလေးတွေကနေ နွေးထွေးစွာနဲ့ ကြိုဆိုနေပါတယ် 🤗🤗🤗
Black Canyon Myanmar (Yangon Int’l Hotel)
No.330, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon International Hotel Compound, Yangon.
Black Canyon Myanmar (Myanmar Plaza)
192, Kabaraye Pagoda road, Yangon, Myanmar, Yangon.
Black Canyon Myanmar (Junction City, Yangon)
Junction City, Yangon.
Black Canyon Myanmar (Sayar San)
No. 52(A), Sayar San Road, Bahan Township,Yangon, Yangon.
Black Canyon Myanmar (Times City)
No. 218, Ground Floor, Times City Complex, Between Hantharwaddy Road and Kyun Taw Road,7Quarter, Kamayut Township, Yangon.
Black Canyon Myanmar (Kantharyar)
RoomNo.K-214, 2nd Floor, Kantharyar Shopping Centre, Coner of Kan Yeik Thar Road and U Aung Myat Road, Magalar Taung Nyunt Township, Yangon.
Black Canyon Myanmar (Sule)
No.118, Ground Floor, First Quarter, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.
အသေး စိတ် သိရှိလိုပါက Black Canyon Official Facebook Page သို့ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။